Ishidi le-Acrylic Colors Fluorescent, i-China Fluorescent Colors Acrylic Sheet Manufacturers, Suppliers, Factory - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
Ikhaya>Product>Ishidi Lombala we-Acylic>Imibala yeFluorescent Ishidi Le-Acrylic
I-Fluorescent Colors Acrylic Sheet ine-agility enemibala ecebile.I-charm ye-fluorescent color acrylic sheet ingaboniswa ekukhanyeni kwemvelo. Kuyinketho enhle yokufakwa esitolo, izibonisi zendawo yokuthengisa nezinye izinhlelo zokusebenza zasendlini.
◇ Wonke amashidi e-acrylic ahlanganiswe ne-UV, amashidi esiqinisekiso awashintshi uma usebenzisa ngaphandle, angasebenzisa ngaphandle iminyaka engu-8-10.
◇ Akukho phunga lapho usikwa ngomshini we-laser noma we-CNC, agobeka kalula futhi akheke.
◇ Ifilimu yokuzivikela ingenisiwe, ijiyile futhi isuswa kalula, akukho glue esele.
◇ Ukubekezelela ukujiya okungcono kakhulu nokujiya okwanele